संकलक : जीवन भट्टराई - Saptahik Magazine
खडानन्द कक्षामा पढाउँदै ।खडानन्द : भन् त बिर्खे, भैंसीले किन पुच्छर हल्लाउँछ ?बिर्खे : पुच्छरमा भैंसीलाई हल्लाउन सक्ने तागत हुँदैन त्यसैले भैंसीले नै पुच्छर हल्लाउँछ सर ।
पत्नी : सुन त खडु, आज राति लाग्ने चन्द्र ग्रहण मैले हेर्नु हुन्छ कि हुँदैन ?खडानन्द : त्यति टाढा हेर्नै पर्दैन नि लाटी, बाथरुममा ठूलो ऐना छ नि, बत्ती बालेर त्यही ऐनामा हेर न, चन्द्रमामा लागेको ग्रहण ।
खडानन्दकी पत्नी बिरामी थिइन् ।खडानन्द : तिम्लाई कतै केही भैहाल्यो भने त म त पागलै हुन्छु नि !पत्नी (बिस्तारै) : कतै दोस्रो बिहे त गर्दैनौ नि ?खडानन्द : पागलको के भरोसा, जे पनि गर्न सक्छ नि ।
रक्सीमा बाहेक कुनै चिजमा भरोसा रहेन
खडानन्द एकाबिहानै बरबराउँदै थिए । हरिबोल टुप्लुक्क आइपुगे ।हरिबोल : हैन के भयो खडानन्द ?खडानन्द : समाचार हेर्‍या । कोकमा लेउ, चाउचाउमा सिसा, फ्रुटीमा गँड्यौला, चामलमा ढुङ्गा । त्यसका बाजे, रक्सीमा बाहेक अरू कुनै पनि चिजमा भरोसा नगरे हुने भो ।
खडानन्दले विवाह गरे र घरमा नयाँ बेहुली भित्र्याए । यद्यपि उनी दोधारमा परे । नयाँ बेहुलीसँग के कुरा गर्ने ? के भन्ने ? के बोल्ने ? लगभग ४५ मिनेट सोचिसकेपछि उनी बेहुलीको छेउमा गए ।खडानन्द : (बेहुलीको कानमा खुसुक्क) आज तिम्रो माइतका मान्छेलाई त थाहा होला नि ? आज तिमी यतै बस्छौ, फर्किंदैनौ भनेर ।
छोरा : बुबा, मलाई १ हजार रुपैयाँ दिनुस् त ।खडानन्द : किन चाहियो १ हजार ?छोरा : मेरा सबै साथीको एकाउन्ट छ, म पनि एकाउन्ट खोल्छु ।खडानन्द : धेरै राम्रो, कहाँ खोल्छस् ?छोरा : चुरोटको पसलमा ।
खडानन्द कक्षामा ।शिक्षक : आज पनि होमवर्क नगरी आइस् होइन खडु ? भन्, के सजाय दिऊँ तँलाई ?बिर्खे : ऊ त्यो पल्लो बेन्चकी केटीले पनि होमवर्क गर्‍या छैन सर, बाथरुममा थुन्दिनुस् हामी दुवै जनालाई ।
खडानन्द : एकदिन यो पृथ्वीमा महाप्रलय हुनेछ, पानी, हावा केही पनि रहने छैन, पृथ्वीमा रहेका सबै जीव नष्ट हुनेछन् ...बिर्खे : सर, त्यो दिन छुट्टी हुन्छ कि हुँदैन ? स्कुल आउनुपर्छ कि पर्दैन ।
डेलिभरीभन्दा पहिले डाक्टर खडानन्दकी श्रीमतीसँग । डाक्टर : तपाईं डेलिभरीको समयमा बच्चाको बाउलाई छेवैमा देख्न चाहनुहुन्छ ? खडानन्दकी श्रीमती : नाइँ पर्दैन, ऊप्रति पहिलेदेखि नै मेरो बूढाले त्यसै शंका गरिरा’छ ।